Juventus Oo Markii Saddedaad Oo Xidhiidh Ah Ku Guulaysatay Koobka Serie A, Cristiano Ronaldo Oo Rekoodh Cusub Oo Taariikhi Ah Dhigay. - Gool24.Net
Juventus Oo Markii Saddedaad Oo Xidhiidh Ah Ku Guulaysatay Koobka Serie A, Cristiano Ronaldo Oo Rekoodh Cusub Oo Taariikhi Ah Dhigay.
Kooxda Juventus ayaa markii siddeedaad oo xidhiidh ah ku guulaysatay koobka horyaalka Talyaaniga kadib markii ay guul 2-1 ah ka gaadhay kooxda Fiorentina. Juventus ayaa kulankan ciyaaraysay iyada oo barbaro kalyia u baahnayd si ay markii 8 aad oo isku xigta ay ugu guulaysato koobka Serie A.
Massimiliano Allegri iyo ciyaartoyda kooxdiisa Juventus ayaa ciilkii iyo murugadii ka hadhitaankii UEFA Champions League ee Ajax waxay iskaga reebeen ku guulaysiga Scudetto iyaga oo koobka sii hantay xili ciyaareedka oo aan dhamaan.
Cristiano Ronaldo ayaa noqday xidigii ugu horeeyay ee ku wada guulaystay saddexda horyaal ee Yurub ugu waa wayn ee Premier league, La liga iyo Serie A isaga oo magiciisa ku qoray taariikhda horyaalada yurub ugu waa wayn.
Kadib markii uu Ronaldo hoga koobka Premier league ugula soo qaaday Man United isla markaana uu Real Madrid kula soo guulaystay La liga waxa uu xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Serie A uu Juventus la qaaday koobkeedii 8 aad oo xidhiidh ah iyada oo ka hor 7 xili ciyaareed oo xidhiidh ah koobkan ku soo guulaysanaysay.
Qaybtii hore ee kulankii Juventus iyo Fiorentina ayaa barbaro 1-1 ah ku dhamaaday kadib markii uu Alex Sandro uu kansalay gool uu dhaliyay Nikola Milenkovic.
Laakiin Juventus ayaa guul ku gaadhay gool uu iska dhaliyay German Pezzella kaas oo karoos uu Cristiano Ronaldo soo sameeyay goolkan iskaga dhaliyay.
Juventus oo hal dhibic uga baahnayd in ay koobka Serie A si rasmi ah u xaqiijisato ayaa 2-1 ku garaacday Fiorentina waxayna hadda Old Lady sii wadatay lahaanshaha buuxa ee koobka Serie A kaas oo ay muddo 8 xili ciyaareed ah aan gacantooda ka bixin.
Si kastaba ha ahaatee, hamigii ugu waynaa ee xili ciyaareedkan ee Juventus oo ahaa in ay ku guulaystaa UEFA Champions League ayaa murugo ku soo dhamaaday kadib markii ay Ajax garoonkooda ku reebtay.
SIDEEDAAD OO XIDHIIDH AH DHEH GEEL BEELE YAHAW